Toban Waxyaabaha Naqshadeeyayaasha Sawirka iyo Nashaadyada Madaxa Banaan | Abuurista khadka tooska ah
Ka dambeeya xirfadle kasta oo qayb ka ah naqshadeeyayaasha garaafyada wadajirka ah waxaa jira qof leh baahidooda iyo danahooda. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaan baranno «wacyigelinta»Macaamiisheena markay nala shaqeynayaan. Waxaan dooneynaa inaan helno khibrado shaqo oo nooc walba leh: Macaamiisha gaarka loo leeyahay, shirkadaha dhexdhexaadka ah ama kuwa waaweyn ... Inkasta oo guud ahaan macmiilka gaarka loo leeyahay badanaa uu yahay "midka ugu dhibka badan" ama dhibaatada leh, waxaa jira xaalado ay shirkaduhu sidoo kale ku kacaan dhaqammo xun. Waxaan toos ula macaamilaa naqshadeeyaha. Maanta waxaan sameyn doonnaa iskudubarid yar oo ka kooban waxyaabaha ay aad u neceb yihiin nashqadeeyayaasha sawirada maalintii shaqadooda.
Way fiicnaan laheyd haddii aad xafiiskaaga dhigto hufnaan ku saabsan waxyaabaha ay tahay in macmiil kasta uu iska ilaaliyo inuu sameeyo markuu kula shaqeynayo. Kii wax digayaa khaayin maahan!
1 1.- Marka horeba? Aad u jaban fadlan!
2 2.- Naqshadayntu waxay noqon doontaa sidan, tan iyo tan oo kale
3 3.- hada waan rabaa
4 4.- Marka hore tus tusaalayaal sida calaamadaydu noqon doonto, markaa waan ka hadli doonaa qiimaha haddii aan xiiseeyo
5 5.- Waa inaad sidan ka sii fiicnaatid, fiiro gaar ah u yeelo
6 6.- Macaamilka / kaaliyaha naqshadeeye
7 7.- Xisbi gaar ah oo ka tirsan xafiiskaaga
8 8.- Wixii hada ka dambeeya waxaad noo noqon doontaa lamaane
9 9.- Markay naga dhigayaan inaan lafaguro bixinta iyo qandaraasyada suurtagalka ah inay nooga tagaan badweynta shakiga
10 10.- Beddel tan, iyo tan ... Tanna!
1.- Marka horeba? Aad u jaban fadlan!
Arrinta sicirka waxay noqon kartaa mid khiyaano leh oo kuxiran nooca naqshadeeye ee aad la macaamilayso. Iyadoo aan loo eegin jawiga aad u guureyso naqshadeeye ahaan, goor dhow ama goor dambe waa inaad u shaqeysaa noocyada macaamiishaas ee ka sarreeya dhammaan dhaqaalaha kale. Waa wax lala yaabo maxaa yeelay marar badan ayay ku weydiin doonaan shaqooyinka noocan oo kale ah ee ganacsiga sida aqoonsi shirkadeed ama agab xayeysiin ah, laakiin in kasta oo ay xaqiiqda tahay in cunsurradan ay muhiim u yihiin abuuritaanka aqoonsi adag, macmiilka noocan ah sidaas ma noqon doono xiiseynaya waxtarka ama tayada adeegyadaada laakiin si toos ah qiimaheeda. Waxay bilaabeen inay gariiraan hadda cayda qiimo sare adigoon xitaa wareysi kula yeelan!
2.- Naqshadayntu waxay noqon doontaa sidan, tan iyo tan oo kale
Waxaa laga yaabaa inaad tahay mid ka mid ah 0% naqshadeeyayaasha qaata naqshadeeyayaasha leh khibrad 30 sano ah oo duurkayaga ah macaamiil ahaan. Hadday sidaas tahay, codsiyadooda ka hor waxaad kaliya haysataa hal xal: Aqbal go'aannada iskuna day inaad sida ugu fiican ugu suurtagasho. Laakiin aan wajahno, tani ma dhaceyso. Tan ugu caansan waa inaad ka hesho xirfadlayaal waax kasta oo aan ka ahayn kana soo gasho albaabka xafiiskaaga sharciyo aad u tiro badan iyo waxa ka sii daran, amarro. Marka tan la helo, waxaad kaliya haysataa hal ikhtiyaar: Awoodsi naftaada dabcanna muuji taas waa adiga oo og waxa aad ka hadlayso.
3.- hada waan rabaa
Waxaan rabaa inaad naqshadeeysid oo aad daabacatid 100 xaashiood caawa. Waxaan rabaa wax fudud, awood leh laakiin qoraal macquul ah, muuqaalo indho qabad leh, iyo moodello xirfadlayaal ah oo xidhan dirayska shirkaddayada. " Salaan halkaas Ma waalannay? Waayahay, malaha tusaalahan xoogaa waa la buunbuuniyay, laakiin waxaad heli doontaa dhowr kiis oo aan aad uga duwanayn kan. Si aad u bilawdid, waa inaad bilowga ka cadeeysaa adeegyada aad soo jeedineyso, kiiskan macmiilku xitaa wuxuu si qaldan ugu fikirayaa inaad midkood ku haysato makiinad daabacan qaybta hoose ee gurigaaga iyo 10 naqshadeeye oo aad adigu mas'uul ka tahay ama aysan lahaan laheyn fikrad yar in shirkadi jirto.Shirkada daabacada dibada.
4.- Marka hore tus tusaalayaal sida calaamadaydu noqon doonto, markaa waan ka hadli doonaa qiimaha haddii aan xiiseeyo
Waa su'aalo ama hadalo inaga qoslaya bilawgii waxaanan aaminsanahay in kani yahay macmiil fahmo leh oo qosol leh. Laakiin markaan ogaanno inuu gebi ahaanba culus yahay, xanaaqa ayaa ina qabta waana la yaabnaa maxaan ugu maal galineynaa lacag aad u badan waxbarashadeena ama waqtiga aan ku horumarineyno. Markaa waxaan xasuusannaa in nashqaddu ay tahay hamigeenna oo markaas uun ayaan illownaa.
5.- Waa inaad sidan ka sii fiicnaatid, fiiro gaar ah u yeelo
Waxaan ku siinayaa shaqo aad u yar. Halkan waxaa ku yaal naqshad ku dhow dhammaystirka Ereyga ama Daabacaha. Kaliya waxaan ubaahanahay inaad kadhigto Sida aan sawirada uga soo qaaday internetka, waxaan rajeynayaa inaysan wax dhibaato ah ka jirin taas. Waxaa jira macaamiil isku dayi doona inay yareeyaan qiimaha ugu dambeeya iyagoo qayb ka mid ah shaqada qabanaya ama ka hor imanaya go'aamadaada. Xaaladahan oo kale, waxaad dooran kartaa oo keliya inaad u dirto macmiilka guriga ama aad u sharraxdo waxa ay tahay shaqadaadu iyo inaad adigu tahay sadaqad badal kuma shaqaysid iyo mashaariicda halista yar.
6.- Macaamilka / kaaliyaha naqshadeeye
Macmiilku wuxuu soo galayaa xafiiskaaga, wuxuu ag fadhiisanayaa kombiyuutarkaaga hortiisa ka dibna wuxuu bilaabayaa inuu ku tababaro xirfadda cricket pepito aad u xanaaq badan: «Halkaan dhig, inbadan oo midigta ah laakiin aan aad u badnayn, ka waran haddii aad isku daydo jumladdan? Waxaan moodayay inay fududahay ...
7.- Xisbi gaar ah oo ka tirsan xafiiskaaga
Waxa kale oo jira noocyada macaamiisha kuwaas oo go'aansada inay aadaan istuudiyahaaga si ay «Kormeer»Shaqada si loo horumariyo oo guud ahaan keligood ma socdaan. Waxay la socdaan madaxa, xoghayaha, wariyaha ama agaasimaha ... Intaad ku shaqeyneyso cadaadis aan la sheegi karin waxay bilaabayaan inay ka faalloodaan dhaq dhaqaaq kasta oo aad sameyso. Waxa kale oo aad la kulmi doontaa macmiilka caadiga ah ee taga xafiiskaaga si uu kuu shaqaaleeyo oo aad dib ugu eegaan shaqadaada dhammaan noocyada dulqaad la'aanta si marka shaqadu u dhammaato iyadoo loo eegayo heerarkooda, waxay kuu sheegayaan «Mahadsanid, hadda waxaan u geynayaa madaxda sare waana ka wada hadli doonaa haddii aan u baahanahay isbeddelo badan mustaqbalka ".
8.- Wixii hada ka dambeeya waxaad noo noqon doontaa lamaane
Waxay dhacdaa xaaladahaas oo uu macmiilku isku dayo inuu dib u dhigo lacag bixinta marka uu ku jiro xaalad dhaqaale oo aan degganeyn, laakiin beddelkeeda si uu u noqdo qayb aan laga maarmi karin oo ka mid ah ganacsigiisa ama xitaa isku dayaya inuu ku siiyo funaanad ay ku qoran tahay astaanta. Tani waxay dhacdaa, i aamin.
9.- Markay naga dhigayaan inaan lafaguro bixinta iyo qandaraasyada suurtagalka ah inay nooga tagaan badweynta shakiga
Qofka macmiilka ah ee X ayaa tusaya, xiiseynaya shaqadaada, wuxuu ku weydiinayaa shaybaarro, wuxuu ku weydiinayaa waqtiyada kama dambaysta ah, xitaa waad sameysaa a miisaaniyad faahfaahsan waxaadna soo jeedinaysaa fikradaha shaqada ama khadadka horumarka. Ka dib 1 saac ka dib si fool ka fool ah u hadal, ku xir wadahadalka "mahadsanid macluumaadka, waan la tashan doonaa waana ka fikiri doonaa. Ma hubo weli ". Ma garanaysid sida dhabta ah laakiin waxaad hubtaa inaadan mar dambe arki doonin isaga, waana sidaas.
10.- Beddel tan, iyo tan ... Tanna!
Ma jiraan wax xanaaq badan oo aan ka ahayn in la gaaro heer dhexdhexaad ama heer sare ah ee shaqada oo macmiilkeennu nagu qasbo inaan sameyno isbeddello saameynaya wejiyada hore oo sidaas darteedna wax kasta oo kale u beddelaya. Wuxuu u bartay inuu dhigo a xaddid tirada isbeddelada iyo wax ka beddelid. Haddii kale kuuma magdhabi doono shaqada aad gelisay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » TOP 10 waxyaabaha naqshadeeyayaasha garaafka neceb
Ciise Nabad dijo
Hahaha 100% run
Ku jawaab Jesús Paz
Better waxaan u aadayaa barashadaada waxaanan si shaqsiyan kuugu sharaxayaa kumbuyuutarka hortiisa ,?
Ku jawaab Kari
Ciise Querales dijo
Hahaha aad bey u runtahay tani waa wax yar oo ka careysiiya XP macaamiisha
Jawaab Jesús Querales
Chechu ee Toledo dijo
Sida nolosha lafteeda !!
Waxa kaliya ee ka maqan ayaa ah mid kale oo caadi ah: «Ma ii sheegi kartaa barnaamijka aad u isticmaasho marka isbadalada la sameynayo, waan sameyn karaa iyaga mana ku qasbin? Horayna loo dhigay, ma ii gudbin kartaa barnaamijka? »
Ku jawaab Chechu de Toledo